श्रीमद्भगवद्गीता- अध्याय-११ – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
Dec 7, 2014 Bhagvadageeta
महान योगेश्वर सर्ब पाप हरण गर्ने श्री हरि कृष्णले अर्जुनलाई परम इश्वरीय दिब्य स्वरुपको दर्शन गराउनु भयो । विश्वरूप परमेश्वरको त्यो बिराटस्वरुपमा अनेक मुख र नयनहरु भएका रुपमा अनेक अदभुत आश्चर्य अनेकौ दिव्य अलंकार र आभुसणले सिङ्गारिएको जसका हातमा अनेक शस्त्रहरु उठाइएका दिव्य माला र बस्त्र धारण गरिएको र दिव्य सुगन्ध चन्दन सर्वाङ्ग सरिरमा लेपन गरिएको यस किसिमको सबै प्रकारले आश्चर्यपूर्ण अनन्त सिमा सबै तर्फ मुख भएका बिराट स्वरुप परम देव परमेश्वरलाइ अर्जुनले देखे अर्थात दर्शन गरे ।
भावानुवाद: त्यो बिराट स्वरुप को आकाशमा हजार सुर्योंको एकैसाथ उत्पन्न प्रकास तेज हो, त्यस्तो तेज, प्रकाश परमात्मा विश्वरूप परमेश्वर लाइ तेजमय दर्शन पाउनु बिरलै हुन्छ । पान्डु पुत्र अर्जुनले त्यस समय अनेक प्रकारले विभाजित अलगअलग लोक सम्पूर्ण जगतको देवताहरुका पनि देवता भगवान श्री कृष्णको सरिरमै अवस्थित भएको देखे ।त्यसपछि आश्चार्य चकित भै रोमाञ्चित भएका धनंजय अर्जुनले आफ्नो शिर झुकाएर विश्वरूपधारी परमेश्वरलाई श्रध्दा भक्ति सहित दुवै हात जोडी प्रणाम गरेर बिन्ति गर्न लागे : हे देवादिदेव ! म हजुरको सरिरमा सम्पूर्ण देवताहरुलाई स्थावर जंगम रुप प्रानिजगतलाइ देखिरहेको छु । त्यसै गरि कमलको आसनमा विराजमान ब्रह्माजीलाई भगवान शंकरजी र समग्र ऋषिजन र दिब्यसर्पहरुलाई पनि देखेरहेको छु ।
भावार्थ : हे विश्वरूप ! म हजुरलाई अनेकौ हातहरु, पेट, मुख र आँखाले युक्त सर्बत्र अनन्तरुप फैलिएको देखिरहेको छु । हे विश्वरूप हजुरको न अन्त्य न त मध्य, न त आदि नै देख्दछु । म हजुरलाई मुकुट धारण गरेको गदा हातमा लिएको, चक्र लिएको चारै तर्फबाट प्रकाशमय तेजको पुञ्जको रुपमा देखिरहेको छु । अत हजुरको स्वरुपलाई बडो कठिनका साथ देख्न सकिने हुनाले प्रखर सुर्य समान दैदिप्यमान, प्रमेयस्वरुप देख्दछु । मे महात्मन हजुर नै जान्न योग्य परम अक्षर परमब्रह्म हुनुहुन्छ । हजुरनै यस जगतको परम आश्रय हुनुहुन्छ । हजुर नै शाश्वत सनातन धर्मको रक्षक हुनुहुन्छ । त्यसैले हजुर अब्यय सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो मेरो मत छ । म हजुरलाई आदि मध्य र अन्त्यहीन, अनन्त शक्ति सामर्थले युक्त अनन्त बाहुहरु भएका चन्द्र सुर्य रुप नेत्र भएका प्रज्वलित अग्निरूप मुख भएका, आफ्नो तेजले यो जगतलाइ नै सन्तप्त गराउने रुपमा देख्दछु । हे महात्मन यो स्वर्ग र पृथ्वीको बिच आकाश तथा सम्पूर्ण दिशाहरु पनि हजुरबाट नै परिपूर्ण छ । हजुरको यो अलौकिक र भयङ्कर रुपलाइ देखेर तिनै लोक व्यथित र भयभित भएका छन् ।
अर्जुन बिन्ति गर्नुहुन्छ : उग्ररुप धारण गर्ने हजुर को हुनुहुन्छ ? मलाइ बताई बक्सियोस । हे देवताका देव हजुरलाई नमस्कार छ । तपाइँ प्रसन्न हुनुहोस । आदिपुरुष हजुरलाई बिशेषरुपमा जान्न चाहन्छु । किनकि मैले हजुरको प्रवृतिलाई जानेको छैन ।भगवान श्री कृष्णले भन्नु भयो : म लोकलाई नास गर्ने बिकराल महाकाल हुँ । अहिले म सारा लोकलाई संहार गर्न लागि रहेको छु । त्यसैले जो यो रणभूमिमा स्थित प्रतिपक्षी योध्दा छन् ति सबै तिमीबिना पनि रहने छैनन् । तिमीले युध्द नगरे पनि यिनीहरुको नाश हुनेछ । त्यसैकारण तिमि युध्दको लागि खडा होउ र यश प्राप्त गरेर सत्रुलाई क्षय गरि धन धान्यले सम्पन्न राज्यको भोग गर । यी सब सुरबीर पहिले नै म बाट मारिसकेका छन् । हे सव्यसाची तिमि अब केवल निमित्त मात्र होउ । द्रोणाचार्य, भिष्मपीतामह तथा जयद्रथ र कर्ण र अन्य बिरयोध्दाहरुलाई बध गर जो मबाट मारीइ सकेका छन् । नडराउ ब्याकुल पनि नहोउ युध्दमा निश्चय जित्ने छौ त्यसैले युध्द गर । संजयले बिन्ति गर्नुहुन्छ : केशब भगवानको यो बचन सुनिसकेपछि काँपिरहेका मुकुटधारी अर्जुनले हात जोडेर नमस्कार गरे । फेरी पनि डराई डराई झुकेर प्रणाम गरि श्रीकृष्ण समक्ष गदगद भै भगभग बोलीले अर्जुनले बिन्ति गर्नु भयो । हे अन्तरयामी भगवान सारा जगत नै हजुरको नाम गुण र प्रभावले किर्तन बाट आनन्द बिभोर भै हर्षित भैरहेका छन्, प्रेममा अनुराग प्राप्त भैरहेका छन् ।
फेरी पनि डराई डराई झुकेर प्रणाम गरि श्रीकृष्ण समक्ष गदगद भै भगभग बोलीले अर्जुनले बिन्ति गर्नु भयो । हे अन्तरयामी भगवान सारा जगत नै हजुरको नाम गुण र प्रभावले किर्तन बाट आनन्द बिभोर भै हर्षित भैरहेका छन्, प्रेममा अनुराग प्राप्त भैरहेका छन् । डराएका राक्षसगणहरु चारै तर्फबाट भागि रहेका छन् र सम्पूर्ण सिध्द पुरुषहरु हजुरलाई नमस्कार गरिरहेका छन् । हे महात्मन हजुर जस्तो ब्रह्माको पनि आदिश्रष्टालाइ यिन जनहरुले किन नमस्कार नगरुन । किनकि हे अनन्त हे देवाधिपति हे जगन्निबास हजुर नै सत असत, त्यो भंदा पनि परम अनश्वर अक्षर तत्व छ, त्यो पनि हजुरनै हुनुहुन्छ । हजुरनै आदिदेव श्रीष्टीकर्ता र सनातन पुरुष हुनुहुन्छ ।
किनकि हजुर अनन्त पराक्रमशालि र समस्त जगतमा व्याप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुर नै सर्ब स्वरुप हुनुहुन्छ । हजुरको यो महिमा र प्रभाव लाइ नजानेर मैले हजुरलाई मित्र साथि मानेर प्रेमले होस् वा प्रमादले होस् हे कृष्ण हे यादव हे साथि भनेर बिनासोचे बिचारी जे जति भने त्यो क्षमा चाहन्छु । यसैगरि घुमफिर गर्दा होस् या कुनै खेलमा होस् ठट्टा जिस्किदा होस् बस्दा उठ्दा सुत्दा खादा होस् वा अगाडी पछाडी अन्यको सामुन्ने अपमानित गरेको हुन् सक्छु । मैले हजुरलाई अपमान गरेको छु भने हे अच्युत त्यसको लागि म अप्रमेयस्वरूप हजुरसँग क्षमायाचना गर्दछु । हजुर यस चराचर जगतको पिता हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठुलो गुरु हुनुहुन्छ र पुजनीय हुनुहुन्छ । अनुपम प्रभावशाली अतुलनीय तुलना गर्ने नमिल्ने तिनै लोकमा अर्को कोइ छैन फेरी हजुर भन्दा बढी को नै हुन् सक्छ ! त्यसैकारण हे इश्वर म आफ्नो सरिर झुकाएर साष्टांग प्रणाम गर्दै आराधाना गर्ने योग्य परमेश्वर हजुरको प्रसंन्नाताको लागि प्रार्थना गर्दछु । पिताले पुत्रको झैँ, साथिले साथीको झैँ, पतिले आफ्नी प्रिय पत्नीको गल्ति सहन गरे जस्तै हे देव प्रभु हजुरले मलाइ आफ्नो प्रिय शिष्य सम्झी अपराधलाइ सहन गरिदिनुस । पहिले कहिल्यै नदेखेको यो आश्चार्यमय रुपलाई देखेर दर्शन पाएर म प्रसन्न र हर्षित भएको छु । साथै डरले मेरो मन पनि कापिरहेको छ । त्यसैले हे प्रभु मलाइ त्यही चतुर्भुज स्वरुप नै दर्शन गराइबक्सियोस । हे जगन्नाथ हे देवताका स्वामी प्रसन्न हुनुहोस ।
भावार्थ : शिरमा मुकुट धारण गरेको हातमा गदा तथा चक्र लिएको म त्यसै रुपमा दर्शन गर्न चाहन्छु । त्यसैले हे बिस्वस्वरुप हे हजार हात भएका भगवान हजुर उही चतुर्भुज रुपमा प्रकट होइबक्सियोस । भगवान ले भन्नुहुन्छ : हे अर्जुन मैले प्रसन्न भएर अनुग्रह पुर्बक मेरो आफ्नो परम योगशाक्तिको प्रभावले दिव्य योगशाक्तिबाट तीमिलाई देखाएको छु । जुन रुप तेजोमय छ, बिश्वब्यापक र सार्वभौम छ अनन्त असिम छ जसलाई तिमीले भन्दा अगाडी कसैले देखेको छैन । हे अर्जुन मनुष्यलोकमा तिमीबाहेक यसप्रकारको विश्वरूप न त बेद, न त् यज्ञहरुको अध्ययनले न दानले, न कर्मको अनुष्ठानले, न उग्र तपले नै यस्तो बिराट स्वरुप तिमि बाहेक अरुमा नै देखिन सक्दछु । मेरो यसप्रकारको बिकराल रुपलाई देखेर तिमीलाई भय र व्याकुलता नहोस र मुढ़भाव पनि नहोस । तिमि भय मुक्त भै प्रेम पुर्बक प्रसन्न भएर मेरो शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रुपलाई फेरी दर्शन गर । संजयले भन्दछन : भगवान बासुदेव कृष्णले अर्जुनलाई यसप्रकार भन्दै फेरी आफ्नो त्यो चतुर्भुज रुपलाई दर्शन गराउनु भयो । पुन महान आत्मा भएका श्रीकृष्णजीले आफ्नो सौम्य सुन्दर शान्त भै कृष्णको रुप धारण गरि भयभित अर्जुनलाई सान्त्वना दिनुभयो ।
अर्जुनले भने : हे जनार्दन हजुरको सौम्य एवं शान्त मनुश्यरूपलाइ देखेर अब म स्थिर भै आफ्नो स्वभाविक स्थितिमा पुगेको छु । भगवानले भन्नुहुन्छ : जुन रुपको दर्शन पाउन अन्त्यन्त दुर्लभ छ त्यहि रुप तिमीले देखेका छौ । यो सुदर्शन हो देवता पनि यो रुप दर्शनको लागि इच्छुक भैरहेका हुन्छन । तिमीले मलाइ जस्तो रुपमा देख्यौ यस प्रकारको चतुर्भुज रुप न बेद अध्ययन व्दारा, न तपस्याले, न दानले र न यज्ञबाट देख्न सकिन्छ । हे शत्रुतापन अर्जुन अनन्य चित्तभक्तिबाट नै यस प्रकारको चतुर्भुजरुप भएको मलाइ तत्व पुर्वक जान्न, देख्न र प्रवेश गर्नको लागि एकोभावबाट प्राप्त हुन सक्छु । जो पुरुष म बासुदेवका लागि कर्म गर्दछ जसको परम गति नै म छु जो मेरो भक्ति गर्छ जो आसक्तिरहित छ, जो समग्र प्रानि जगतसंग बैरभाव गर्दैन, हे पान्डूपुत्र त्यस्ता मनुष्यले अबस्य मलाइ पाउदछ । ।